FRACTIONAL RF Golden tsono MACHINE
4D 3IN1 HIFU + kuvesa + kusangana nekutsi kwemukadzi TIGHTENING
4D 2IN1 HIFU + kuvesa
3D 2IN1 HIFU + kusangana nekutsi kwemukadzi
4D 2IN1 HIFU + kusangana nekutsi kwemukadzi TIGHTENING
Our itsva chigadzirwa ichangobva vatatu mumwe runako chiridzwa anogona kuzadzisa zvina zvinokonzerwa ganda tightening, finyamo kubviswa akakwana, kuumba muviri, sungisa pudendum. The zvemberi Chikamu matatu chete runako mudziyo ndiko kushandiswa zvemberi ultrasonic simba.
Wayo yakasiyana mukuru-simba pfungwa Ultrasound, ultrasonic kutaura unogona kusvika zvakananga kuti SMAS layer kusimudzira kuturika pakati SMAS fascia, uye comprehensively kugadzirisa sagging uye kutandara zvinetso kumeso. It chaizvo locates iri ultrasonic simba panguva 4.5mm fascia rukoko pasi ganda.
Our itsva ichangobva chigadzirwa 2 muna 1 4D runako mudziyo (Radar mutsetse kuvesa + 4multi-mutsetse) anogona kuzadzisa zvinokonzerwa zvitatu kwakakwana tightening ganda, kubvisa kuunyana, kuumba muviri. The zvemberi Chikamu 2 muna 1 4D ndiye kushandiswa zvemberi ultrasonic simba.
Anti-Aging Pdt, Derma Wand Hair Removal Machine Beauty Equipment , Musatsauswa Ultrassom , Liposonix For Body kuumba , chiso Beauty Equipment , Hair Removal Device Home Use,